Dirxi nool oo laga soo saaray maskaxda nin muddo ka cabanayay madax xanuun saa'da - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dirxi nool oo laga soo saaray maskaxda nin muddo ka cabanayay madax xanuun saa’da
Dirxi nool ayaa laga soo saaray maskaxda nin ku nool dalkaasi Maraykanka oo muddo badan ka cabanayay madax xanuun saa’da. Ninkan oo lagu magacaabo Luwiis Ortis ayaa isbitaal la dhigey kadib wuxuu ku tilmaamay madax gartaac kii ugu xuma ee uu abid la kulmo. Luwiis Ortis ma sheegin sida dirxigu ku galay waxase inta badan laga soo qaadaa dhulka kaymaha ee dalxiiska loo tago.
Luwiis Ortis ayaa la dhigey isbitaal ku yaala gobolka CaliFornia waxana loo sheegay in uu haysto 30 mirir oo uu ku noolaado. Qaliin lagu sameeyay madaxiisa ayaa laga soo saaray dirxi nool oo islaba rogaya markii loo sheegayna Luwiis Ortis waa naxay.
Dirxiga ayaa ku korey madaxa Luwiis Ortis wuxuuna ku sigtey in uu kala jaro biyaha iyo hawada u kala gudbaya qaybaha maskaxda. Baaris lagu sameeyay maskaxda ninkan ayaa lagu arkay waynida dirxigan.
Dhaqaatiirta ayaa sheegay marka dirxigu galo jirka waxa qaraxda ukunta taas oo ku korta jirka qofka keentana madax xanuunka weyn ee uu dareemay Luwiis Ortis.
Dhaqaatiirta ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii ilaa kun qof laga soo saaro dirxigan ku korey maskaxdooda. Ninkan ayaa loo sheegay hadii uu sugi lahaa muddo in aanu joogeen dunida. Luwiis Ortis ayaa hadda dib ugu laabtey waxbarasho uu ka watay jaamacad ku taal California.
Xoolaha cuna doog dirxi leh ayaa u soo gudbiya dadka siiba marka ay cunaan hilib aan si fiican loo Karin wuxuuna ku badan yahay wadamada soo koraya. Dirxiga ayaa inta badan ku nool mindhicirada waxayna soo raacaan saxarada qofka.
Waxa looga hortagaa nadaafada cuntada aad cuneyso oo si fiican loo kariyo iyo khudrada oo si fiican loo maydho.